Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Politika tamin’ny Jolay 2012
Politika · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Jolay, 2012
23 Jolay 2012
Mpanoratra Vilhelm Konnander · Eoropa Afovoany & Atsinanana
22 Jolay 2012
Mpanoratra Ángel Carrión · Amerika Latina
Mpanoratra Maha El-Sanosi · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Mpanoratra Rayna St. · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Handresy manoloana ireo fitaovana fanaraha-maso vaovao ve ny teknolojian'ny tsy fitononana anarana? Ary hampiroborobo ny demaokrasia va re ny teknolojia finday - sa hitarika bebe kokoa ho any amin'ny fihazàna sy fanaraha-maso misimisy kokoa? Resadresaka iray teo Washington, DC ny 25 Jona 2012 niarahana taminà mafàna fo 6 avy any...
Narahan'ireo Iraniana mpitoraka bilaogy hadrohadro ny fanehoan-keviny tamin'ilay fanafihan'ny Syriana mpanohitra tao Damaskaosy sy ny fanapoahana baomba izay nahafaty ireo tomponandraikitra ambony telo amin'ny fiarovana ny fitondran'ny Filoha Syriana Bashar Al Assad. Tsara ny fifandraisana eo amin'i Iran sy Syria ary dia nanàla azy tokoa ireo vahoaka amin'ny mety ho...
Zava-Nahagaga Kely tamin'ny Fifidianana Parlemantera tany Timor Atsinanana
Nanatontosa ny fifidianana parlemanterany tamin'ny 7 Jolay ny tany Timor Atsinanana. Ambany ny taha-pandraisan'anjara tamin'ity taona ity fa mba tsy nisy kosa aloha na izany aza ny tranga goavana nahitana herisetra sy hosoka amin'ny hala-bato. Nampiasa ny tenifototra #eleisaun2012 sy #timorelections ny mponina amin'ny aterineto hizarana ny vaovao mikasika ny...